Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l1013 tal
Lesona 10 : Izay zava-dehibe aloha (Hagay)
01 - 07 Jona 2013
Aza matahotra !
Talata 04 Jona
Ny Hagay 2:1-5 dia mampiseho fa mizotra ho amin’ny fifohazana lehibe ny vahoakan’Andriamanitra ao amin’ny Hagay 2:1–5 ary mahaliana tokoa izany. Afaka iray volana teo ho eo taorian’ny niantombohan’ny asa fananganana ny tempoly, dia nandefa teny mampahery tamin’ny alalan’i Hagay Andriamanitra, ho an’ireo sisa izay nanapa-kevitra ny hanorina indray ny tranon’ Andriamanitra, araka ny baikon’ireo mpaminany, na dia tsy nanana izay hoenti-manana araka ny tokony ho izy aza izy ireo. Nanontanian’i Hagay ireo loholona hoe: “manao ahoana ny toetry ny tempoly ankehitriny raha ampitahaina amin’ny endriny talohan’ny nanaovana sesi-tany ny Jiosy?” Hita miharihary fa tsy afaka mifaninana amin’ny voninahiny taloha ny endriny ankehitriny. Nety ho kivy ny olona satria tsy afaka nanorina tempoly nanana famirapiratana sahala amin’ny famirapiratan’ny tempolin’i Sôlômôna izay nitsangana teo amin’io toerana io fahiny.
Nampirisika ny olona hanohy hatrany ny asa ilay mpaminany satria nitoetra tao aminy ny Fanahin’Andriamanitra. Niangavy ireo olona rehetra ao amin’ny vondron’ny sisa izy mba hahery sy hiasa mafy noho ny fisian’Andriamanitra Tsitoha eo anivon’izy ireo. Araka ny fandrenesana azy dia mitovy amin’ny tenin’i Jehôvah tamin’i Jôsoà taorian’ny nahafatesan’i Mosessy ny tenin’i Hagay tamin’ireo mpitarika hoe: “Mahereza!... Aza matahotra!” (Jôs. 1:5–9). Arakaraka ny maha-kely sy osa azy ireo eo amin’ny lafiny fitaovana hoenti-manatanteraka ny asa no maha-lehibe ny filàn’izy ireo finoana an’Andriamanitra. Nilaza ilay mpaminany fa ny voninahitr’io tempoly io any am-parany dia ho lehibe noho ny voninahiny tany aloha. Ny fahatongavan’Ilay Anankiray Izay lehibe noho ny tempoly (jer. ny Mat. 12:6) ihany anefa no nahatonga izany ho marina.
Ny fanatrehan’ny Fanahy no nanamafy ny fitohizan’ny fanjakan’Andriamanitra tany Isiraely. Ny Fanahin’ Andriamanitra, izay nitarika an’i Mosesy sy ireo loholona, ary naniraka ireo mpaminany hitondra ny hafatra azony avy tamin’ny tsindrimandry, dia teo anivon’ireo sisa. Ny fihetsika araka an’Andriamanitra nasehon’ny mpitarika sy ny vahoaka dia nanaporofo ny fanavaozana ara-panahy izay niseho. Nanatrika teo ny Fanahy mba hanavao azy ireo sy hampanakaiky azy ireo bebe kokoa amin’Andriamanitra. Ny fanatrehan’ny Fanahy ihany koa dia nahazoana antoka ny firotsahan’ny fitahiana be dia be. Nampirisika ny vahoaka ny mpaminany Hagay mba hiasa hahatonga ny teny fikasan’Andriamanitra ho tanteraka.
Nizara ny Tenin’Andriamanitra tamin’ireo olona nandalo fiainana sarotra sy fahadisoam-panantenana i Hagay. Nosarihiny ny sain’izy ireo ho any amin’Andriamanitra, Izay mahatoky ary manantena ilay vondron’olona vaovao ho mponina mahatsiaro andraikitra ao amin’ny fanjakany, sy maharitra amin’ny fanaovan-tsoa, ka noho izany dia mahita fa misy dikany lehibe sy tanjona kendrena ny fiainany.
Tsy nety nino an’Andriamanitra intsony ny lehilahy iray, 35 taona, ka nanoratra ny fikasany hamono tena tao anatin’ny takila miisa 1900 mialoha ny hanatanterahany izany. Izao no voasoratra tao anatin’izany hafatra izany: “Ny teny tsirairay, ny eritreritra tsirairay ary ny fihetseham-po tsirairay dia miverina any amin’ilay olana tokana sady fototra: zava-poana ny fiainana.” Tsy ny finoantsika an’Andriamanitra ihany fa ny fahavononantsika hankatò Azy koa no mampisy dikany ny fiainantsika. Amin’ny fomba ahaona?